खुसीको खबर ; निर्म’ला प’न्त’को ह’ त्या’रा आज सा’र्वजनिक गरिदै… – Gorkhali Dainik
खुसीको खबर ; निर्म’ला प’न्त’को ह’ त्या’रा आज सा’र्वजनिक गरिदै…
March 30, 2021 694
एक दुख’द घ’टना जसले सिंगो प्रहरी माथि प्रश्न चिन्ह ख’डा गर्यो । अ’नुस’न्धान’को क्रममा भएका के’हि त्रु’टिले सिंगो प्रहरीनै ब’दना”मी हु’नु पर्यो । घ’टना हो क’ञ्चनपुर’की कि’शो’री नि’र्म’ला प’न्त’को ह’ त्या’। ११ साउन २०७५ मा कञ्चनपुरको भी’मदत्त नगरपालिका-१८ नि’म्बुखे’डास्थित उ’खुबारी’मा नि’र्म’ला प’न्त’को श’व फे’ला परे’को थि’यो ।त्यसपछी प्रहरी अ’नुसन्धान’ले नि’र्म’ला’को ब’ला ’त्का’ र प’छी ह’ त्या भए’को पु’ष्टि भ’यो तर ह’ त्या ’मा दो’षी भ’न्दै प’क्रा’उ ग’रेक व्य’क्ति नि’र्दो’ष रहे’को भ’न्दै छो’ड्’नु प’र्दा प्रहरी मा’थि नै प्रश्न चिन्ह ते’र्सि’यो । अहिले प्रह’री आफु मा’थि ला’गे’को दा’ग मे’टा’उ’न र नि’र्म’ला’लाई न्या’य दि’न जो’डतो’ड’का साथ यो घटना’को अ’नु’स’न्धा’न गरिरहे’को छ ।
हामीले दैनिक चलाउ’ने साबुन सानो हुँदै जाँदा त्यसलाई हामी फाल्छौं। झन् होट’लहरूमा त ग्राहकले प्रयोग गरेका साबुन दैनिक फेरिन्छ। ग्राहकले पूरै नचलाएका साबुन त्यसै खेर जान्छ। खेर जाने यस्तै साबुन पुनः प्रयोग गर्ने हो भने यसले वाता’वरण सफाइमा मद्दत मिल्छ। तर कसरी?
‘इको सोप बैंक’ यसको ज’वाफ हो।
खेर जाने सा’बुन संकलन गरी प्रशोधन गर्दै इको सोपले सफा र फेरि प्रयोग गर्न मिल्ने साबुन बनाउँछ। पुनः प्रयोग भन्नाले प्र’योग भएको साबुनमा स्यानिटाइज गर्ने रसायन हाल्ने, अनि त्यही साबुनलाई नयाँ बनाउने हो,’ इको सोप नेपा’लकी प्रोजेक्ट प्रबन्धक निकी लामा बताउँछिन्।
यो पनि पढ्नुहोस्: हुम्लाको मुख्य याता’यातको साधनका रूपमा रहेको हवाई सेवा दुई दिनदेखि प्रभावित भएको छ। जिल्लामा लागेको बाक्लो तुवाँ’लोका कारण सिमकोट विमानस्थ’लको हवाई सेवा दुई दिनदेखि प्रभावित भएको हो।
आइतबार बि’हानदेखि देखिएको धुवाँजस्तो देखिने तुवाँलोका कारण दुई दिनदेखि नेपालगञ्ज तथा सुर्खेतबाट हुने सम्पूर्ण हवाई सेवा बन्द भएको छ। तुवाँलोको कारण दई दिनमा दुई दर्ज’नभन्दा बढी उडान रद्द भएका छन्। तुवाँलोले सोमबार साँझसम्म पनि जिल्लाभर छोपेकाले आज पनि उडानको सम्भा’वना कम रहेको छ।
उडान नभएपछि यात्रुलाई आव’तजावत गर्न असहज भएको छ।काठमाडौँसहित देशभर असर गरेको वायुप्रदूषणले जिल्लाको हवाई सेवा प्रभा’वित बनाएको हो। आइतबार बिहानदेखि जिल्लामा दृश्य क्षमता (भिजिबिलिटी) नपुग्दा दुई दिनदेखि हवाई सेवा प्रभावित बनेको हो। जिल्लाको एक मात्रै अन्तर जिल्ला जोड्ने हवाई सेवा प्रभावित हुँदा निर्माण सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य साम’ग्रीको ढुवानीमा समेत समस्या भएको छ। – सेतोपाटी बाट
Prevअर्को दु:ख’द खबर- होली खेल्ने क्रममा १५ जनाको नि’ध’न ! पुरै गाउँ नै शो’क’मा पर्यो #RIP
Nextबाग्लुङ घ’ट’ना : पि’ट्दै भी’रमा हु’-या’ए, ल’ह’रोमा अ’ड्कि’एर ज्या’न ब’चाए’काले दिए यस्तो ब’यान (भिडियो सहित)
कुकुर छोड्न नमानेपछि विवाह रोकियो……….!
माधव नेपाललाई ओलीको आग्रह : आत्मालोचना गरेर पार्टीमा फर्किनुस्